Izicelo ezibalulekileyo ze-Android ekufuneka zifakwe ewe okanye ewe | Iindaba zeGajethi
Umbulali weviniga | | Android, software
Sinamawaka namawaka ezicelo kwivenkile kaGoogle ebizwa ngokuba yiVenkile yokuDlala, kodwa, phakathi kwabaninzi, kukho ezinye eziboniswa zibalulekile, kwaye ezo Kuyimfuneko ukuba zifakelwe Ngenxa yokusebenza kwabo okuphezulu kunye nendlela ababonelela ngayo ngeempawu ezizodwa kwisixhobo sethu se-Android.
Zininzi, ezinje ngeWhatsApp njengesicelo semiyalezo simahla, I-Dropbox njengomzekelo wokugqibela wento eyiyo ukugcinwa kwelifu okanye i-Evernote njengesicelo sokwenza kunye noku-odola zonke iintlobo zamanqaku umsebenzi wazo wahluka kakhulu ngokuxhomekeke kwiimfuno zethu. Siza kuqokelela usetyenziso olufanelekileyo ekufuneka ulufakile nguewe okanye ewe kwifowuni yakho okanye kwi-tablet.
Siza kukubonisa ezimbini zodidi ngalunye ezibalulekileyo kwaye ziyimfuneko ekufakweni kwiitheminali zakho, nangaphezulu ukuba uqala ukuthatha amanyathelo akho okuqala kwihlabathi le-Android, ukusukela Ngamanye amaxesha akukho lula ukwahlula esiphi isicelo Kuyimfuneko ukwenza umsebenzi othile ngenxa yamakhulu amawaka onawo kwiVenkile yokuDlala.
1 Imiyalezo ekwi-Intanethi
2 IiNtlalo zeNtlalo
4 Ukugcinwa kwelifu
5 Ukubhala amanqaku
6 Iindaba kunye nabafundi beRSS
7 Izikhangeli zewebhu
8 Abadlali beaudiyo nevidiyo
9 IiFoto zokusebenza
11 Ukugcina umfanekiso
WhatsApp: Eyona nkonzo yemiyalezo yasimahla ye-intanethi iyafumaneka kwaye iyabonakala ngenxa yobunzima bokukhanya kwesicelo kunye nomthwalo omncinci ocinga ukuba uza kufakelwa kwisiphelo sethu.
I-BBM: Ukuba ufuna inkonzo yekhuriya ngemiyalezo ebhaliweyo Kwaye oko kukhuselekile ngokupheleleyo, le yiBlackBerry Messenger, esandula ukwaziswa kwi-Android kunye ne-iOS kwaye yamkelwe kakuhle.
Facebook: Yintoni ongayithetha nge-Facebook engaziwayo, kwaye ke ayinakuba ilahlekile kweli nqanaba, kuba ikuvumela ukuba ubenayo kwi-smartphone okanye ithebhulethi yakho kwinethiwekhi ethandwa kakhulu emhlabeni. Nangona inokusetyenzwa ngcono, inezinto ezibalulekileyo.
TwilleySinokubeka i-Twitter apha, kodwa iPinterest iyasebenza Njengefashoni yenethiwekhi yoluntu kwaye sisixhobo esihle sokufuna inkuthazo kwaye sabelane ngayo nabanye, njengoko bezizibonakalisa kwiVenkile yokuDlala.
Twicca: Olu sethungelwano lwenethiwekhi yeetweets, yenye yezona zibalaseleyo kwaye ibikunye nathi ixesha elide kwi-Android. Inayo yonke into onokuyicela ujongano olulula olula ukuphatha.
TwitterIsicelo esisemthethweni se-Twitter ngekhe sibe kolu luhlu ukuba akunjalo kuba kutshanje Ihlaziyiwe ngokupheleleyo kwi-Android kwaye inokuba lukhetho olubalulekileyo.
lwebhokisi: Ukuba i-WhatsApp yeyona ilungileyo ekuthumeleni imiyalezo nakuFacebook kuthungelwano lwentlalo, I-Dropbox yinkonzo yokugcina kwilifu elibaluleke kakhulu kwi-Android, ukubakho njenge isicelo esibalulekileyo kwizixhobo zakho eziphathwayo Ukwabelana ngeefolda nokwandisa amandla okugcina.
IJottacloud: Ayaziwa kakuhle, kodwa le yinkampani yaseNorway enenkonzo elungileyo yokugcina ilifu kwaye lukhetho olukhulu ukunika 5GB simahla ngokwenza iakhawunti.
vernoteElinye lamagama amakhulu xa kuziwa ekubeni nesicelo esifakelweyo njenge-Evernote, kunye nayo Isakhono esikhulu sokwenza amanqaku, zihlele kwiincwadana kwaye zabelane ngazo nabasebenzisi abaninzi ukwenza ukusebenzisana njengangaphambili.
Google KeepEnye yeenkonzo ezintsha zikaGoogle yiGcina, ukwenza amanqaku, nge uyilo olugqwesileyo olubalaseleyo Inayo yonke into oyifunayo kwisicelo solu hlobo.
Iindaba kunye nabafundi beRSS
Flipboard: Ngale sicelo unga Yenza eyakho imagazini ngemithombo eyahlukeneyo yazo zonke iintlobo zolwazi kunye nolwakho. Ngomgangatho obonakalayo obonakalayo, iFlipboard yenye yezona zinto zibalulekileyo kwi-Android.
gReader: Ukuba ujonga umfundi kwiifidi ezithile zeRSS, iReader sisicelo esinoyilo ngononophelo olubonakalisiweyo ngokuguquguquka kunye nesantya esisingathwa ngaso, unokhetho oluninzi lokwenza ngokwezifiso nokuqwalasela.
I-Dolphin Browser: SineGoogle Chrome, Firefox okanye iOpera, kodwa iDolphin Browser ikwazile ukuthatha indawo yakho kwaye yazilungiselela njenge Esinye sezikhangeli zewebhu ezilungileyo onokuzifumanela iifowuni okanye iipilisi. Kubalulekile ukuhamba kwayo ngokukhawuleza kwisicelo, isantya sayo sokulayisha kunye neendlela ezininzi ezinjengemodi yasebusuku.
Google ChromeIsikhangeli esigqibeleleyo esikwisimo esikhutshiweyo nguGoogle ukuze sibe sesona silungileyo kwi-Android Kunzima ukukhethaNokuba yihlengethwa okanye ugoogle, zizame ngokwakho.
Abadlali beaudiyo nevidiyo
I-Spotify: Thatha esi sikhundla kuba ngoku unesibonelelo esitsha apho Inkonzo yeepilisi ayihlawulelwa nakwii-smartphones kunokwenzeka ukuba kudlalwe uluhlu lokudlala, nangona kukhubazekile ukuba iingoma ziya kudlalwa ngokungahleliwe.
I-VLC: Ukuba i-VLC yeyona mdlali ubalaseleyo kwiikhompyuter ze-PC, kuhlobo lwe-Android, une-4 × 4 ukuze ukwazi ukudlala Zonke iifomathi zevidiyo nezomsindo Kwisiphelo sakho okanye ithebhulethi. Ayinakho ukuphoswa kwireferensi yakho yeeapps ezifakiweyo.
Ikhamera360 Ekugqibeleni: Isicelo simahla esinokuthi buyisela ngokugqibeleleyo onayo njengomgangatho kwi-Android yakho. Inokhetho oluninzi kwaye yeyona ilungileyo unokuyifumana kwiVenkile yokudlala.
I-Pixlr Express: Singakukhomba kwi-Instagram, kodwa namhlanje siyakubhaqa isacholo onokuthi uhlele usisebenzise Amakhulu eefilitha ezahlukeneyo ukwenza iifoto ezintle. I-Pixlr Express isimahla kwaye ivunyiwe yi-Autodesk.
INyanga + Reader: Ukuba uthanda ukufunda iincwadi ze-elektroniki, iNyanga + Reader lukhetho olubaluleke kakhulu ekukonwabeleni ukufunda kwi-Android yakho. Ibe yonke into enokufunwa kwisicelo esinjalo.
Umfundi we-EZPDF: Kwaye ukuba uhlala usebenzisa iifayile zokufunda kwifomathi yePDF, i-EZPDF Reader sesinye isicelo esihle ekufuneka unaso ilayibrari yakho ebonakalayo kwifowuni yakho okanye ithebhulethi.
Imgur: Enye yeenkonzo ze ukubamba imifanekiso yefashoni nokuba inika amandla okwabelana nawo wonke umntu onobuhlakani bakho xa kufikwa ekufotweni.
FlickrNdiza kukunika 1 Terabyte yokugcina amawaka Iifoto ozifunayo, ukuba yenye yezona nkonzo zintle zokugcina iifoto kwi-Intanethi.
Zininzi ezinye iindidi oko sikushiye equleni, kodwa abalishumi elinanye abakhankanyiweyo ngokuqinisekileyo baya kuvula iihorizons ezintsha xa kufikwa ekufundeni ngezicelo ezitsha, kuba khange sitsho nge-Instagram edumileyo yokufota okanye kumculo, inkonzo yeGoogle Play Music.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyenza kwaye ulawule iifolda ekwabelwana ngazo kwiDropbox ye-Android
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Kufuneka-ube neeapps ze-Android